नेपालीलार्इ जापानमा रोजगारी अनिश्चित
काठमाडौं । नेपाली कामदारलाई जापानको रोजगारी अनिश्चित बनेको छ । समयमै दुई मुलुकबीच सम्झौता हुन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय तालिम सहयोग संगठन (जिटको) अन्र्तगत नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाँदै आएकोमा जापालले प्राविधिक प्रशिक्षण तालिम(टिआइटिपी) लागु गरेको छ । टिआइटिपीअनुसार दुई मुलुकबिच सहयोग सम्झदारी(एमओसी) हुन नसक्दा जापानको रोजगारी अनिश्चित बनेको हो । नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार लैजान जापानले २८ नोभेम्बर […]
कुबेतमा मालिकका छोराले नै नेपाली महिलाको हत्या गरे
कुबेत । घरेलु कामदारका रुपमा कुबेत पुगेकी सुनसरीकी महिलाको मालिकका छोराबाट हत्या भएको छ । ४५ वर्षीया पेशलमाया राईको छुरी प्रहार गरी हत्या भएको जनाइएकाे छ । उनको राहदानी नम्बर ०६५५६१९६ र नागरिकता नम्बर २४८ हो । राईको ३ अगस्टमै हत्या भएको खुलेको छ । हत्यामा संलग्न नागरिक पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । दूताबासले राईको […]
पर्यटक भिसाको डरलाग्दो ‘सेटिङ’ विमानस्थलमा मानव तस्करको सञ्जाल !
काठमाडाैं – दुवई जान लागेका तीन नेपाली महिलालाई यही साता नयाँदिल्ली अध्यागमनले काठमाडौं फिर्ता पठाईदियो । पर्यटक भिसामा गएका उनीहरुका पासपोर्टमा ‘लो प्रोफाईल’ भन्ने टिप्पणीसमते लेखिदियो । उनीहरु तयसअघि कुनै देश गएका थिएनन् । पर्यटक हैसियत प्रस्ट्याउन सकेनन् । भारतीय अध्ययगमनले मानव तस्करको सञ्जालमा परेको आशंका गर्यो । तीनै जनालार्य एयर इन्डियाले काठमाडौं फिर्ता ल्याएपछि […]
मलेसियामा विषाक्त मदिरा सेवनबाट ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या ६ पुग्यो
मलेसिया । मलेसियामा विषाक्त मदिरा सेवनबाट ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या ६ पुगेको छ । मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले विषाक्त मदिरा सेवनबाट मृत्यु हुने नेपालीको संख्या ६ पुगेको जनाएको छ । मृत्यु हुनेमा सञ्जय उराव, विशाल बुढाथोकी र मिमबहादुर घले रहेका छन् । बाँकी तीन जनाको नाम खुल्न बाँकी रहेको दूतावासले जनाएका छन् । विषाक्त मदिरा पिउँदा […]
नौ हजार कामदार मलेसियाको कालोसुचीमा पर्ने खतरा
काठमाडाैं । कलिङ भिसा लिएर पनि उड्न नआएपछि करिब नौ हजार नेपाली कामदार कालोसूचिमा पर्ने खतरा बढेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जेठ २ पछि बन्द गरेको मलेसियाको राजगारी खुल्ने निश्चित नहुँदा त्यस्तो खतरा देखिएको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले कामदारलाई हित हने गरी गरेको उक्त निर्णय विविध कारणले […]
मलेसियामा कामदारको पारिश्रमिक वृद्धि
मलेसियाले कामदारको न्युनतम पारिश्रमिकमा वृद्धि गरेको छ । मलेसियाली प्रधानमन्त्री कार्यालयले बुधबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै मलेसियाका सबै निजी क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण कामदारका लागि आगामी वर्षको जनवरीदेखि लागू हुने गरी ५० रिंगिट वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ । यो निर्णय पूर्ण रुपमा लागू भएमा आगामी वर्षदेखि यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारले न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक […]
कोरियाबाट शव झिकाउन करोड !
रोजगारीको आकर्षक गन्तब्य मानिएको दक्षिण कोरियामा ज्यान गुमाएका कामदारको शव झिकाउन नेपालले वर्षमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । विगतमा नेपालले गतिलो गरी कोरियासँग श्रम सम्झौता गर्न नसक्दा शव झिकाउनमै त्यति ठुलो रकम खर्च गर्नुपरेको हो । पछिल्ला दिनमा कोरिया पुगेका कमदारको मृत्यु हुने क्रम बढ्दै गएकाले खर्च अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ […]
प्रहरीको गोलीबाट अमेरिकामा एक जना नेपाली युवाको मृत्यु
अमेरिका । प्रहरीको गोलीबाट शनिबार साँझ अमेरिकाको कोलोराडो डेनभर नजिकै रहेको ब्रुमफिल्डमा एक नेपाली युवाको मृत्यु भएको छ । स्थानिय मिडिया फक्स न्युज ३१ का अनुसार शनिबार साँझ करिब ८ बजेर ४५ मिनेट जाँदा प्रहरीले गोली चलाउँदा एक युवाको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा अन्दाजी २५ वर्षका बीरेन्द्र ठकुरी रहेको जनाइएको छ । मृतक […]
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कामदारले अनावश्यक रुपमा थप १९ हजार तिर्नुपरेको भन्दै गत जेठ २ गतेदेखि मलेसियामा नेपाली पठाउन रोक लगाईरहेको छ । श्रम सम्झौता गर्न दुई देशमा अधिकारबीच चरणबद्ध वार्ता भएका छन्, झन्डै डेढ बर्षदेखि रोकिएको वार्ता पनि सुचारु हुने वातावरण बनिरहेको छ, मलेसियाका लागि कार्यवाहक नेपाली राजदुत कुमार खरेलले भने, दुवै […]
काठमाडाैं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मौरिससमा पढ्न जान चाहने विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) दिन रोक लगाएको छ । दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली राजदूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयको सुझावमा मन्त्रालयले अनुमतिपत्र दिन रोकेको हो । दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर अध्ययनका लागि मौरिसस पुगेका विद्यार्थी पटक/पटक अलपत्र परेर उद्धार गर्नुपरेको जानकारी गराएको थियो । दूतावासको […]